Insanity Workout 4 FREE Zvipo Plus 2 Bonus Insanity Workouts
musha » Beachbody » Insanity Workout: Gamuchira 4 FREE Gifts Plus 2 Bonus Insanity Workouts
Kubudirira Kwemagariro Kunoita Basa Rokushanda DVD Shingairira Kuchengetedza:
Ne Shaun T's Insanity workout, iwe uchakanganwa zvinhu zvose zvaunoziva nezvekukwirira kwekushanda. Neyo insanity Workout set, iwe unoshanda mu 3-5 maminitsi mabheji uye unongotora mapumha ayo akareba zvakakwana kuti anzwisise mhepo. Uyu maitiro ekugadzira muviri anonzi Max Interval Training. Nekudzidziswa kwemazuva akawanda, unochengetedza muviri wako uchishanda pauwandu hwepamusoro hwehutambo hwako hwose. Iwe uchaderedza muviri wako kusvika pakuguma. Mukudzoka, muviri wako unodzidza kugadzirisa uye iwe uchange uine humi hwepamusoro mumazuva 60 chete.
Nekudzidzira kwemazuva mashoma, iwe unofamba nenzira yakanongeka, uye ingosimudza kukurumidza kwako uye kunzwa kuterera kweminiti. Basa reInSANITY rinopesana zvachose. Mazuva ekudzidziswa kwemaawa ave akaratidzwa kupisa pamusoro pe1000 makorikori awa!
Unotora 10 Workout DVD neThe Insanity System:
Kwemwedzi Mumwechete, Basa Rako Rino:
1. ZVIMWE ZVINOKUDZIDZISWA NEZVEDZIDZO - Shingai makumbo uye glutes
2. CHIKURU CHINHU CHINHU - Ichi chinonyora chifuva chako, maoko, shure, uye mapepa
3. KADHIYO YAKANAKA - Inopisa mafuta akawanda
4. CARDIO ABS - Basa guru rekuita kuitira kuti uwane chinotsanangurwa pakati pechikamu
5. RECOVERY - Ichi Kuvandudza kupora kunopa muviri wako kuparara pamagumo evhiki yakakura yekushanda
Mwedzi 2 Unosanganisira Aya 4 Insanity Workouts:
1. MAX INTERVAL CIRCUIT - Basa iri richava mushumo wakaoma zvikuru wekuvhara kwemaawa iwe wawakaita kusvikira ikozvino
2. MAX INTERVAL PLYO - Izvi zvinoshandiswa pakugadzira mapurisa zvichisimudza makumbo ako
3. MAX CARDIO CONDITIONING - Ichi ndicho chakanyanya kukanganisa cardio workout inotora muviri wako kusvika pakupera
4. MAX RECOVERY - Ita iwe kuvaka simba uye uwanezve
4 FREE Bonus Zvipo Kana Uchitenga Nhasi:
- Karenda ye60 zuva rekushanda rinokuratidza kuti basa rakadini rinofanira kuitwa zuva rimwe nerimwe
- Kukurumidza kutanga kushungurudza gwara rinotakura iwe kuburikidza nerwendo rwemaminitsi gumi yemuviri wako wemwedzi 2 shanduko
- Yakanaka yezvokudya zvirongwa. Iyi yakakosha yezvokudya chirongwa inokupa mazuva 60 anokosha emareji uye mhando dzekushandisa. Kuti uite mafuta, unofanirwa kuwedzera muviri wako nekudya kwakakodzera
- HERE hupenyu hutano huchakuchengetedza iwe wakasimba uye unotarisa. Iwe uchasangana nevanhu vatatu vari kuitawo Insanity Workout yakafanana newe
Sekuwedzera bhonasi yakawedzerwa yekuraira Insanity system, unowana 2 bonus Insanity workouts
- Core Cardio & Balance - Basa iri rakagadzirwa nemitambo yezemitambo inoita kuti iwe uende semutambo. Izvi zvakakosha kuita basa munguva yekushandura kubva ku1st kusvika ku2nd yevhiki
- Shaun T's Fit Test - Izvi zvinotarisana nemiedzo inokuratidza izvo zvawakaitwa iwe paunotevera yako insanity workout progress.
Iko Insanity Workout inounza migumisiro yakashata nokuda kwekubhadhara kwe 3 kwedzimwechete kwe $ 39.95 pamwe ne $ 24.95 kutumira nekubata.
Zuva re60 ZUVA ROSE-BODY CONDITIONING PROGRAM inowanikwa paDVD - Dzvanya pano kuti Uite Nhasi
* Iri Sangano Rokunyora 4 FREE Zvikomborero Zvimwe 2 Bonus Insanity Workouts Zvokupa zvakajeka seZv 10 / 28 / 13 4: 01 AM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa paBlackbody panguva yekutenga ichashandiswa pakutengwa kwechigadzirwa ichi
October 28, 2013 FitnessRebates Beachbody, DVD No Comment	Insanity 4 FREE Zvipo, Insanity Bonus Workouts, Shaun T's Insanity workout